Shiinaha Universal TV Wall Mount B27 warshad iyo soosaarayaasha | Zeno
Wareegtada Gidaarka Universal TV
Janjeeri darbiga TV Mounts
Mooshinka TV-ga Mooshinka Oo Dhameystiran
Saqafka TV ga
Hubka La Soco
Armaajooyinka Sanduuqa Dhiga
Qaybta Taleefanka Qalabka Fidiyaha ee TV-ga Fallaaraha Mount HT001 (14 ″ -42 ″)
Bedelida Universal ee TV-yada Z500M
Projector Fuula T218 / W
LCD hagaajin karo saqafka Mount for 32-70 inch Flat ...
Qaab No.: B27
Nooca Kordhinta: Buurta Darbiga
Nooca Dhaqdhaqaaqa: Go'an
Sumadda: Customization La heli karo
Cabbirka TV-ga: 42 inji
Cabirka Ugu Yar ee iswaafajin kara: 32 inji
Qalabka la jaan qaadi kara: Telefishanka
Hel Pricelist Nala soo xiriir
27 B27, Profile-ka Feejignaanta Fiidiyowga, wuxuu ku habboon yahay 14 ″ -42 ″ inji, taas oo ka dhigtay macaamiisha inay ku dhejin karaan TV-ga guryahooda keligood waqtiga degdegga ah. Macaamiisha ayaa si fudud u dhejin kara LCD-kooda guud, muujinta LED-ka dusha saxanka derbiga si deg deg loogu rakibo. Sidoo kale macaamiisha ayaa si siman shaashadooda ugu dhex rogi kara saxanka darbiga si ay ugu habboonaadaan xagalkooda kala duwan ee muuqaalka shaashadda.
Design Naqshaddan qaab-dhismeedkeedu hooseeyo waxay ka dhigtay TV-gaaga fidsan 'ultrathin flat flat' meel aad ugu dhow derbiga, oo kaliya 34mm u jira derbiga. Si fudud oo deg deg ah rakibaadda iyo kala-goynta ayaa ka dhigtay qoysaskaaga inay dareemaan inay aad ugu habboon yihiin inay u guuraan TV-gaaga oo ay u wareegaan meel kala duwan, sidoo kale waxay badbaadin karaan saddex-meelood laba meelood meel rakibidda marka loo eego kuwa kale ee darbiga guud ee adduunka ah.
Iyada oo aad u tiro badan oo qalab ah, isku imaatinka ugu yar, iyo xawaare sare oo shidan, waxaad TV-gaaga ku dhejin doontaa darbiga 30 daqiiqo ka yar.
There Ma jiraan wax aynaan ka fikirin? Guji nidaamka amniga qufulka wuxuu sameeyaa qancin 'guji' marka TV-gaagu si ammaan ah gidaarka ugu dhegan yahay. Xadhigyada si dhakhso leh loo sii daayo ayaa sii deynaya TV-ga si aad si fudud ugu heli karto fiilooyinka
Design Naqshadeynta saxanka darbiga ee ballaaran wuxuu la shaqeeyaa labada xabo ee 16 ″ & 24 ″. Buurtan sidoo kale waxaa lagu dhejin karaa darbiyada shubka ah & darbiyada adag.
La jaan qaadi kara dhammaan noocyada waaweyn ee TV-ga oo ay ku jiraan TCL, Samsung, LG, Vizio, iyo inbadan. Echogear, waxaan leenahay khubaro TV Mount ah oo diyaar u ah inay caawiyaan 7 maalmood usbuucii.
Deji oo iska iloow. Ugu dambayntiina TV fududaan.
Haddii aad u baahan tahay TV lagu rakibay hal meel oo aan u baahnayn inuu leexleexo ama janjeero tani waa kan kuugu habboon adiga.
Maaddaama aysan u baahnayn inay dhaqaaqdo, waxay leedahay muuqaalka ugu hooseeya, markaa buurku asal ahaan lama arki karo derbiga. Saaxiibbadaa waxay u malayn doonaan inay si xeel-dheer u noolaynayso markay yimaadaan, sida Wingardium Leviosa. Noocan buurta sidoo kale waxay ku habboon tahay noocyo kala duwan oo ah qaababka VESA, iyagoo hagaajinaya la jaanqaadka magacyada TV-ga sida Samsung, Vizio, iyo Sony.
Ku dhowaanshaha darbiga wuxuu leeyahay hal dhib oo weyn, way adag tahay in la helo fiilooyinkaaga. Nasiib wanaag, kuweenu waxay leeyihiin xargo si ay si fudud TV-ga uga furtan buurta, si ay u gaaraan fiilooyinkaaga iyagoon u baahnayn in TV-ga oo dhan hoos u dhigo, oo waqtiga kuu badbaadiyo. Dhammaanteenna waxaan wada ognahay in waqtigu yahay lacag, lacagtuna ay tahay awood, awooduna ay tahay pizza, fiisaduna ay tahay aqoon.
Sababtoo ah buurtu uma baahna inay guurto, sidoo kale waa ikhtiyaarka ikhtiyaariyada ugu habboon ee miisaaniyadda iyo ugu fudud ee la fuulo.
Waa kuwan faahfaahinta:
VESA Iswaafajinta: 100 × 100, 200 × 100, 200 × 200,
Isbedelka Lateral ?: Haa
Meelaha loo baahan yahay: 2
U Dhignaashada Darbiga: 16 ″ ama 24 ″ on Center Alwaaxyo iyo La taaban karo
Dhismo: 100% Bir Sare oo Bir ah
Faahfaahinta faahfaahsan ee B27:
Ku habboon: 14 ″ -42 ″
Awood xamuul: 25kg
Fogaanta gidaarka: 24mm + 10mm
Gudaha Sanduuqa: 29.7 * 20 * 2.3cm
kumbiyuutarada / kartoonka 10 kumbiyuutarada
Sanduuqa Dibedda: 54 * 31.5 * 22cm
Xiga: LCD TV hagaajin karo Saqafka Mount for 32-70 inch Flat Screen TVs
geeska tv ga darbiga
Go'an Tv Wall Mount
Janjeeri Tv Wall Mount
Buurta Universal Tv
Fagaaraha Qimeng Chuangye, Degmada Panyu, Magaalada Guangzhou, Gobolka Guangdong, Shiinaha